Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တရားမ၀င်ခိုးဝင်သူအရေးနှင့် ပါသက်ပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့သော အရေးအခင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ အရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် လွတ်တော်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်မှ ဆွေးနွေးချက်
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တရားမ၀င်ခိုးဝင်သူအရေးနှင့် ပါသက်ပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့သော အရေးအခင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ အရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် လွတ်တော်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်မှ ဆွေးနွေးချက်
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တရားမ၀င်ခိုးဝင်သူအရေးနှင့် ပါသက်ပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့သော အရေးအခင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ အရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် လွတ်တော်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်မှ ဆွေးနွေးချက်ဖြစ်တယ်...၊
တယောက်လက်မှတယောက်ဆင့်လို့ဖြန့် ဝေပေးကြပါ.
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 03:09
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တရားမ၀င်ခိုးဝင်သူအရေးနှင့် ပါသက်ပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့သော အရေးအခင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ အရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် လွတ်တော်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်မှ ဆွေးနွေးချက် . All Rights Reserved